हलमा ‘मालिका’ र ‘चङ्गा चेट’, कुन हेर्ने ? • Gazzabko Online
हलमा ‘मालिका’ र ‘चङ्गा चेट’, कुन हेर्ने ?
Gazzabkoonline.com || November 2, 2018 at 1:21 pm
रेखा थापा अभिनित फिल्म ‘मालिका’ र ‘चङ्गा चेट’ आजबाट देशभर रिलिज भएका छन् । तिहारको मौकालाई छोपेर रिलिज भएका यी दुई फिल्म मध्य कस्को ब्यापार कस्तो हुन्छ ? त्यो आगामी दिनमा थाहा हुनेछ । ‘छक्का पञ्जा ३’ को लहर चलिरहँदा ‘मालिका’ र ‘चङ्गा चेट’ कति दिन हलमा टिक्छन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् । रेखा थापाको ‘मालिका’ महिला प्रधान चलचित्र हो जस्ले महिला अधिकारको विषयलाई मुल रुपमा उठाएको छ भने चङ्गा चेटले पैसा हुने र नहुने युवाहरुको कथालाई ब्यंग्यात्मक रुपममा पस्केको छ । ‘मालिका ‘ गम्भिर प्रकृतीको फिल्म हो भने ‘चङ्गा चेट’ मनोरञ्जनको लागि बनाइएको फिल्म हो । दुबै फिल्मका आ–आफ्नै दर्शकहरु छन् । कुन फिल्म हेर्ने त्यो दर्शकहरुको रोजाई हो ।
‘मालिका’मा रेखा थापा बाहेक अन्य कुनै पनि ठुला स्टार कास्ट छैनन् । नयाँ कलाकारलाई फिल्ममा देख्न सकिन्छन् । उता ‘चङ्गा चेट’ भने चर्चित स्टारहरुले भरिएको फिल्म हो । संदिप क्षेत्री, आयुष्मान देशराज, सुरक्षा पन्त, प्रियंका कार्की, रविन्द्र झा लगायतका चर्चित कलाकारहरुले चङ्गा चेटमा अभिनय गरेका छन् । ‘चङ्गा चेट’को राम्रो पक्ष अर्को पनि छ त्यो भनेको निर्देशक दिपेन्द्र खनालले निर्देशन गरेका छन् । जस्ले पशुपति प्रसाद र चपली हाईट जस्ता हिट फिल्म निर्देशन गरेका छन् ।’मालिका’ रेखा थापाको आफ्नै निर्देशन हो । यसअघि पनि रेखा थापाले निर्देशन गरेका फिल्मले राम्रो ब्यापार गर्न सकेका थिएनन् । तर पनि रेखा थापाको स्टारडमका कारण हलसम्म दर्शकहरु पक्कै जानेछन् ।